Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiraa Hero HTC .
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray ka HTC Hero
Waxaan tirtiray xiriirada saaxiibkay ayaa, liiska oo dhan!
Sidaas qayb ka ah rush waxaan ahaa shalay. Markii aan u ciyaarayay phone saaxiibkay ee cusub, HTC Hero, si qalad ah waan la tirtiro liiska xiriir oo dhan. Waan ogahay waa wax doqonimo! Ma uusan u hagaagsan xiriiro si uu xisaabta Google. Waxaan dareemaa inaan eedeysane oo doonaya in ay helaan jid ay ugu heli xiriirada uu. Ma jiraa weli fursad u heystaan ​​inay retrive kuwa xiriirka la tirtiray? Haddii ay jirto, fadlan ha i garan. Mahadsan million ah.
Waxaad dhab ahaan u baahan tahay inaad uga taxaddaraan marka la casriga cusub ciyaaro. Waa quruxsan fudud si ay u masixi xogta casriga ah. Mararka qaarkood, waxa kaliya tuubada yar, iyo xogta aad ka dhammaatay. Dadka isticmaala android, waa run ahaantii hab fiican si aad u bilowdo .Wadashaqayntaas la xisaabtaada Google, ama gurmad liiska xiriirada ka on your computer iyadoo qalab Tababaraha Android. Waa hagaag, marka waxan ku faraxsaneyn dhacdo, waxaad u baahan tahay in ay is dajiyaan oo ay joojiyaan isticmaalka telefoonka mar kale ilaa aad ka heshid xiriirrada lumay, xogta cusub overwrite karo xiriirada aad lumay oo aad u weligiis baaba'aan.
Markaas ka heli HTC Hero qalab kabashada xiriiro si ay u qabtaan soo kabashada xogta sida ugu dhaqsaha badan. Waxaad si fiican dooran lahaa qalab kuu ogolaanaya inaad si ku eegaan dhammaan xogta recoverable ka hor inta aadan soo kabsado iyaga, sababtoo ah in badan oo software ma dhab ahaantii u dhaqmaan sida ay iyagu yidhaahdaan. Badan oo qalab kuwa soo ceshano karaa oo kaliya sawiro iyo videos ka card SD ah, laakiin xiriirada aan jirin. Haddii aadan haysan wax fikrad ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone for Android . Software Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku ool ah ka soo kabsado xiriirada tirtiray ka HTC Hero ee 3 kaliya tallaabooyin.
Tallaabada 1. Isku aad telefoon si kombiyuutarka
Marka aad telefoonka ku xidhmaan, haddii barnaamijka aad muujinaysaa daaqadaha hoos ku qoran, waxaad u baahan tahay in aad telefoonka dhigay in hab debugging USB adigoo raacaya talaabooyinka halkan:
* Ogow Settings ah ee aad taleefan oo guji.
* hoos Slide iyo dooran fursadaha Developer .
* sahlo debugging USB .
Haddii ay horeba u suurta iyo aad weli heli suuqa kala hoose, fadlan gab oo mar kale awood.
Marka aad telefoonka waa in hab debugging USB, barnaamijka wuxuu idin tusin muuqaalka hoose ka dib markii la aqoonsado.
Tallaabada 2. Ku bilow baar Hero HTC aad
Hadda waxaad bilaabi kartaa dhowr aad telefoon si aad u hesho xiriirada aad laga badiyay. Ka hor inta aadan u samayn, marka hore hubi batteriga. Hubi in waxa uu ku amray in ka badan 20%, si scan doono aan la joojin. Dabadiisna, riix badhanka Start ku saabsan suuqa kala barnaamijka si ay u falanqeeyaan xogta ku saabsan telefoonka. Just raac tilmaan iyo samayn talaabooyinka adag, barnaamijka bilaabi doonaa baar Hero HTC aad xoogaa ilbiriqsiyo ah sida hoos ku qoran.
Tallaabada 3. ceshano xiriirada aad badiyay Hero HTC
Marka scan ka istaago, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xiriirada helay natiijada scan by doorashada Xiriirada dhinaca bidix ee suuqa. Markaas hubi waxyaabaha aad rabto in aad guji Ladnaansho in iyaga dhawri si aad u computer. The file xiriir kabsaday noqon kartaa CSV, VCF ama file HTML. Oo sidaas waa inaad iyaga ku hayn karaa on your computer sida file a akhrin karo, oo iyaga soo dhoofsadaan dib ugu telefoonka kula haboon Android xiriir kala iibsiga qalab.
Fiiro gaar ah: In ka badan xiriirada, sidoo kale waxaad soo kaban karto, xiriirada, sawiro, videos, audio iyo waraaqaha on Hero HTC haddii aad rabto. Ma aha oo kaliya waxyaabaha tirtiray, Wondershare Dr.Fone for Android kaa caawin kara si aad u hesho oo aad u dhoofiyaan xiriirada jira ee aad taleefan.